Iphupha malunga ne-UFO Attack ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
"UFO" mfutshane "Into Engaziwayo yokubhabha." Kuluntu lwethu, eli gama lihlala lisetyenziswa ngokunxulumene nombuzo wokuba ngaba zikhona na ezinye izinto eziphilayo esithubeni ngaphandle kwezo zisemhlabeni, ukuba kukho abasemzini abanokuthi bahambe umhlaba ngesiphekepheke. Le meko ihlala ixoxwa kwiimovie ngokukodwa.
En el mundo Ukusuka kwiimovie kunye neencwadi, abaphambukeli ngamanye amaxesha banobubi, bafuna ukoyisa umhlaba wethu okanye batshabalalise ubuntu. Kweminye imiboniso bhanyabhanya kunye nothotho lweemveliso, nangona kunjalo, abaphambukeli bakwabonakaliswa njengabantu abanobuhlobo abasebenza nabantu kwaye bade bangene kubudlelwane bobuhlakani.
Ukongeza kwinto eboniswa kwimiboniso bhanyabhanya, sinokubona le meko Uloyiko emaphupheni ethu. Abanye abantu baphupha ngohlaselo lwe-UFO, baziva besoyika kwaye beziva bengenakuzinceda kwaye bengenakuzinceda. Kodwa uhlaselo lweUFO lunokuchazwa njani njengomqondiso wephupha?
1 Uphawu lwephupha «Uhlaselo lweUFO» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Uhlaselo lwe-UFO» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Uhlaselo lwe-UFO» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Uhlaselo lweUFO» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokoluvo ngokubanzi, i-UFO ingabonisa ephupheni ukuba umntu ochaphazelekayo unobunzima kuye Imvakalelo yokwenyani ukukhusela. Uyalahleka ngokukhawuleza kwizimvo ezithile eziziziphumo zokucinga kwakho. Ezi zimvo zinokoyikisa kwaye zikwenze ungathandabuzi ukuba ukwindlela elungileyo ebomini.
Ukuba into eyoyikisayo ivela kwi-UFO ephupheni, ihlasela apha, oku kufanekisela ukuba iingcinga ezingalunganga zalo mntu kuthethwa ngaye ziphuma kulawulo kubomi bakhe bemihla ngemihla kwaye ngakumbi nangakumbi Ukoyika ikamva ziphuhlisiwe. Ke ngoko, kuya kufuneka uqonde iphupha njengesimemo sokujonga iimeko ngokwenyani. Kwangelo xesha, kubalulekile ukuba ufunde ukukholelwa kuwe nakwizakhono zakho.
Ukuba utshintsho luza kuwe, oku akusoloko kuthetha ukonakala kwimeko yakho, kubomi bakho bemihla ngemihla. Endaweni yoko, ezi zinokubonelela ngombono omtsha kunye mathuba ukubonisa. Ngethuba nje iphupha likholelwa ngokwalo, yonke into izakuphela kakuhle ekugqibeleni kwaye uloyiko lwakho alunasiseko.
Uphawu lwephupha «Uhlaselo lwe-UFO» - ukutolikwa kwengqondo
Kwimeko yezengqondo, uhlaselo lwe-UFO lunokwenzeka ephupheni. ungquzulwano lwangaphakathi kwaye zifanekisela ukungalingani komntu ochaphazelekayo. Ngokwe-psychoanalyst Carl Gustav Jung, uphawu lubonisa ukungqubana ngaphakathi. Mhlawumbi ukuphupha kunengxaki enye ukuzijongela phantsiLe mvakalelo inokukuthintela ukuba unganikezeli kwiimvakalelo zakho ezisisiseko kunye neminqweno.
Ukuba uphupha uhlaselo lwe-UFO, kubonisa ukuba umntu ekuthethwa ngaye ulangazelela ukubonisa kwaye aphile ngeemvakalelo zakhe, kodwa woyika oku. Iphupha kufuneka libenjalo isilumkiso yengqondo engaqondakaliyo ukuvumela iimvakalelo. Ngaphandle koko, iphupha lisongela ukukhokelela kuphuhliso olubi.
Uphawu lwephupha «Uhlaselo lwe-UFO» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokutolika, uhlaselo lweUFO oluphuphileyo luphawula enye ingozi yokomoya, ingozi engenakuphononongwa ngamaphupha. Ngokunokwenzeka oku kunokuba kuvele kumntu ochaphazelekayo engazithatheli phantsi iimfuno zabo.